Ukufika Kildare - IntoKildare
Ukufika eKildare bekungeke kube lula noma kusheshe ngezixhumanisi zezokuthutha ongakhetha kuzo. Uma usufikile, sincoma ukuhamba ngemoto noma ukuvakasha okuqondisiwe ukuze uhlole wonke amakhona. Noma uma ufuna ukuhlala phansi, inethiwekhi ejwayelekile yesitimela namabhasi izokusa emadolobheni amakhulu nasemaphandleni.
Uphi uKildare vele?
Awuyazi i-geography yase-Ireland? I-County Kildare isogwini olusempumalanga ye-Ireland onqenqemeni lweDublin. Iphinde inqume izifunda iWicklow, iLaois, i-Offaly, iMeath neCarlow ngakho-ke kusenhliziyweni yaseMpumalanga Yasendulo yase-Ireland.
Yakhiwe ngamadolobha aphithizelayo, amadolobhana amahle, agudle izindawo ezisemaphandleni ezingacekiwe nemizila emihle yamanzi, iKildare yindawo enhle yokujabulela impilo yasemaphandleni yase-Ireland kanye nomsebenzi wamadolobha amakhulu.
Njengoba kunemizila eminingi ongakhetha kuyo, i-Ireland neKildare zitholakala kalula ngendiza. Kunezikhumulo zezindiza ezine zamazwe omhlaba e-Ireland - eDublin, eCork, eIreland West naseShannon - ezixhumene ngqo nezindiza ezivela e-US, Canada, Middle East, UK nase-Europe.
Isikhumulo sezindiza esiseduzane ne-County Kildare yisikhumulo sezindiza i-Dublin. Ukuze uthole amashejuli endiza nolunye ulwazi vakashela dublinairport.com
Lapho ufika ungathatha isitimela, ibhasi noma uqashe imoto. Inethiwekhi yomgwaqo uzoba nayo eKildare ngokushesha!
Ukushayela kuyindlela enhle yokuthola wonke amakhona weKildare. IKildare ixhunywe kahle kuwo wonke amadolobha amakhulu ngomgwaqo okusho ukuthi isikhathi esincane osichitha uhamba nesikhathi esithe xaxa sokuhlola!
Uma ungafuni ukuletha amasondo akho, kunenketho yezinkampani eziqashelwa umhlaba wonke zokuqasha izimoto ongakhetha kuzo ukufaka hertz futhi umbono kanye ne UDan Dooley, I-Europcar futhi Enterprise. Ngokuqasha okufushane, izinsizakalo zokwabelana ngemoto njenge Iya Imoto unikele ngamanani nsuku zonke nangehora. Ukuqashwa kwezimoto kuyatholakala kuzo zonke izikhumulo zezindiza ezinkulu nasemadolobheni - khumbula ukuthi ukushayela e-Ireland kungakwesokunxele somgwaqo!
Ukusuka eDublin Airport, iKildare ifinyelelwa ngaphansi kwehora nge-M50 ne-M4 noma i-M7, ngenkathi ngamahora amabili nje ukusuka eCork (nge-M8) noma eShannon Airport (nge-M7) ungaba senhliziyweni yeKildare.
Ukuhlela uhambo lwakho kusengaphambili, vakashela www.ayolanda.ie ngemizila ehamba phambili nokuzulazula okuthembekile.
Hlala phansi, uphumule futhi uvumele omunye umuntu ashayele. Ama-Eurolines isebenza ngezinsizakalo ezivamile ezivela eYurophu naseGreat Britain. Uma usese-Ireland, Qhubeka, UJJ Kavanagh futhi Umqeqeshi waseDublin sizokusa eKildare kusuka enkabeni yedolobha laseDublin, eDublin Airport, eCork, eKillarney, eKilkenny, eLimerick naseKildare.
I-Irish Rail isebenza njalo ngezinsizakalo zesitimela zansuku zonke ukuya nokubuya emadolobheni amakhulu, kufaka phakathi iCork, iGalway, iDublin neWaterford. Ukuya eKildare ngesitimela usuka eDublin Connolly noma eHeuston ngemizuzu engama-35 nje.
Ukubhuka kusengaphambili kunconyiwe njengoba izinsizakalo zingaba matasa. Vakashela I-Irish Rail ukuthola uhlelo lwezikhathi oluphelele nokubhuka.
Kukhona ukukhetha kwezinsizakalo eziya eGreat Britain, France naseSpain eziqhutshwa yi Izikebhe zase-Ireland, IBrittany Ferries futhi I-Stena Line.
Kusuka eRosslare Europort naseCork Port, indawo oya kuyo yeholide itholakala kalula cishe emahoreni amabili ngemoto. IDublin Port ixhunywe kahle futhi izokunikeza ukufinyelela eKildare esikhathini esingaphansi kwehora ngemoto, ibhasi noma isitimela.
Izixhumanisi Zokuhamba Eziwusizo